Zimbabwe Govt Mulls Increasing Mining Royalties
2017825Mining royalties are charged in terms of the Mines and Minerals Act and according to the Zimbabwe Revenue Authoritys schedule diamond miners .
Zimbabwe Mining Royalties Dividends To Fund New
Finance Minister Patrick Chinamasa said in October Harare planned a sovereign wealth fund law by February but hinted at the time the government might not have any money at first due to the need to overhaul crumbling infrastructure But a Sovereign Wealth Fund of Zimbabwe Bill seen by Reuters on Monday said a portion not exceeding a quarter of royalties from seven minerals including .
Mining Law 2019 Laws And Regulations Zimbabwe
The ICLG to Mining Laws and Regulations covers common issues in mining laws and regulations including the mechanics of acquisition of rights foreign ownership and indigenous ownership requirements and restrictions processing beneficiation in 29 jurisdictions.
High Mining Royalties Turn Away Investors Zimbabwe
2013102High rates of royalties in the mining sector are scaring away investors making Zimbabwe a less competitive destination for business according to mining experts In the six months to June 2013 royalties alone gobbled up 811m from the industry The .
Mining Stakeholders Welcome Zambia Mineral Royalty
2016415Several mining stakeholders have welcomed the new Zambia mineral royalty tax after it was revised in April 2015As a means to improve public understanding of the Zambia mineral royalty tax and to promote informed comment the Zambia Chamber of Mines has urged Zambians to download its report on Mineral Royalty Tax.
Zimbabwe Parliament Pushes For Royalties Review
2014123THE Zimbabwe parliament is pushing Mines minister Walter Chidhakwa to cut mining royalties amid concerns that the levies are limiting investment in .
Mining Royalties Dip 45 Percent DailyNews Live
2014129HARARE Zimbabwes mining royalties slumped by 45 percent to 1337 million against a target of 245 million in the full year to December 2013 casting further doubt on the countrys 2014 economic projections Sternford Moyo the Zimbabwe Revenue Authority Zimra .
20121113MIneral royaltIes anD other MInIngspeCIfIC taxes MIneral taxes Mineral royalty and tax types and their characteristics As special taxes for the mining sector are in principle directed at the net value of the mineral resource after the deduction of costs of production including normal profits they should be levied as.
What ZIMRA Does Zimbabwe Revenue Authority
2019523The Zimbabwe Revenue Authority which derives its mandate from the Revenue Authority Act Chapter 2311 and other subsidiary legislation is responsible for assessing collecting and accounting for revenue on behalf of the State through the Ministry of Finance Mining Royalties charged in terms of the Mines and Minerals Act Chapter 21 .
2019523Zimbabwes biggest gold producer sued the countrys central bank for 132m because it has been paying for the metal in a local quasicurrency rather than US dollars.
Royalties Archives The Mozambique Resources Post
Africa Mining Zimbabwe mining royalties plunge reflects struggling economy Posted on July 31 2015 by Mozambique Resources Post Zimbabwes tax collections were six below target during the first half of the year while mining royalties and value added tax plunged reflecting a struggling economy the tax agency said on Wednesday .
Zimbabwe Mining Royalties Go Up 2284 Business
Zimbabwe mining royalties go up 2284 Published 17 July 2017 REVENUE from mining royalties has in the first half of 2017 gone up by 2284 percent to 3427 million against a target of 279 million buoyed by rising gold and platinum output During the period Fidelity Printers and Refiners the sole gold buyer in the country spent 350 .
Small Scale Gold Miners Welcome Royalties Scrapping
2017130ZIMBABWES smallscale miners have welcomed the governments proposal to scrap royalties levied on gold producers saying the initiative will help boost output Mines and Mining .
Zimbabwe Fund To Tap Mine Royalties IOL Business
20131126Harare Zimbabwes planned sovereign wealth fund may get as much as a quarter of mining royalties and the same share of special dividends on state mineral and metal sales A .
Zimbabwe Mulls Use It Or Lose It Approach To Mining
2019411Zimbabwe may withdraw mining rights from companies that take too long to dig for minerals the deputy mines minister said on Wednesday part of efforts to lift output in a sector vital to the .
2019513PROSPECTING EXPLORATION AND MINING TITLES The Mines and Minerals Act Chapter 2105 is the law for the mining industry in Zimbabwe There are other Acts and Regulations that draw their existence from this Mines and Minerals Act The Act has been acknowledged as a good piece of legislation by both local and international investors.
Miners To Get Royalties Reprieve The Herald
201425Zimbabwe is likely to revoke the recent amendment to fiscal law that stops mining companies from claiming royalties for tax purposes The move to prohibit mining companies from claiming royalties .
Mining Royalty Payments Miss Target
2013123AfDB said in its economic review on Zimbabwe for last month that the mineral royalties in Zimbabwe were still too high since there was a substantial increase of the mining .
2014113 Up to 25 pct of royalties dividends to fund SWF Mugabe will be trustee patron of wealth fund HARARE Jan 13 Reuters A proposed sovereign wealth fund in Zimbabwe will be bankrolled by .
Zim Fund To Get 25 Of Mining Royalties Miningmx
20131125miningmxcom ZIMBABWEs proposed state wealth fund may get up to 25 of mining royalties and special dividends on state mineral and metal sales said Bloomberg News citing a draft proposal due to be put to the countrys parliament early next year.
Zimbabwe Beats Q1 Tax Target But Company Tax
2015426Zimbabwes tax collections were five percent above target at 897 million during the first quarter of this year but revenue from companies and mining royalties fell the head of the national tax .
Africa Corporate Data Investment In Africa Africa
The most comprehensive database of African private companies for due diligence and business development.
Mining Law 2018 Laws and Regulations Zimbabwe ICLG Sep 25 2017 Mining Law in Zimbabwe covering issues of Relevant Authorities and LegislationMechanics of Acquisition of RightsTransfer and EncumbranceEnvironmental Formalising Zimbabwes Artisanal Mining Sector Project263 Sep 24 2013 All forms of artisanal mining are illegal in Zimbabwe.
Miners Haul US34bn Fortune Zimbabwe Situation
2019210The mining sector earned more than US34 billion last year driven by high international metal prices and record breaking output particularly for gold diamonds chrome and nickel This saw the Zimbabwe Revenue Authority Zimra getting over US95 million in mining royalties Statistics gleaned by .
2016 Tax Reckoner Grantthorntoncozw
2016212Mining Contact us TAXATION IN ZIMBABWE Taxation in Zimbabwe is source based and has not changed to residency based system as had been discussed during the course of the year Therefore all income that accrues or is deemed to have accrued in Zimbabwe is taxed in Zimbabwe The tax year in Zimbabwe runs from 1 January to 31 December.
Marange Diamond Fields Wikipedia
2019521The Marange diamond fields are an area of widespread smallscale diamond production in Chiadzwa Mutare West Zimbabwe Although estimates of the reserves contained in this area vary wildly some have suggested that it could be home to one of the worlds richest diamond deposits The hugely prolific fields are regarded by some experts as the worlds biggest diamond in carats not by .
Gold Mining Equipment For Sale In Dubai 2011